Blink Hackers Group: Eleven Media Group Websites Got Hacked Again!
Eleven Media Group Websites Got Hacked Again!
Eleven Media Group Editor သန်းထွတ်အောင် သည် အစိုးရကိုအပုပ်ချတိုက်ခိုက် ၊ ပြည်သူလူထုကိုစော်ကား ၊ မီဒီယာလွပ်လပ်ခွင့်ဟု အော်နေပြီး Eleven Page မှာ ဆဲဆိုခြင်းမပါပဲ အကြံပေးထောက်ပြ comment ပေးသည်ကို comment ကို ဖျက်ပြီး ဘန်း နေခြင်းသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လော?
ထို့ကြောင့် သတိပေးသည့်အနေဖြင့် Eleven Myanamr Website နှင့် The Daily Eleven Website တို့ကို တိုက်ခိုက်လိုက်ပါသည်။
10:36 PM Cyberwarfare 0